Haddaan Taageero Waayey, Ma Tabaan Waayey?!! | Xarshinonline News
Haddaan Taageero Waayey, Ma Tabaan Waayey?!!
Dadweyenaha sharafta leh ee reer soomaaliland waxan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu. Ayadoo oo maanta loo dareeray codbixintii doorashada Madaxweynaha, waxaan Illaahay ka baryeyaa in ay si nabadgalyo ah inoogu dhacdo.
Waxan jecelahay inaan sii baraarujiyo shacbiga isbeddel-doonka ah si ay codkooda uugu hubsadaan xisbiga kulmiye oo masiirka dadka iyo dalkuba ku toosayo.
Taageerada xisbiga Kulmiye oo buuxdhaaftey iyadoo lagaasoo digaroganayo xisbiga Udub, Maxaa u sabab ah?
1. Kaarbetkii Casaa ee Odweyne (The Odweyne Red Carpet Reception)
Kadib socdaalkii Mujaahid AHMED MOHAMED MOHAMOUD SIILANYO ku tagay Odweyne, waxay anfariir iyo layaab ku noqotay xisbiga Udub oo beesha Odweyne isku halaynaysey.
2. Taageerada ay beesha saaxil ay siisey kulmiye, iyadoo Udub iskuhalayneysey oo qoondeysatay inay helayso taageeradooda.
3. Wasiirada, xildhibaanada, madaxdhaqameedada, fanaaniinta iyo wakiilada xisbiga UDUB oo si xaddhaafa uugu soo biiraya kulmiye, waxay u qooskoysay rajadii ay ka qabeen in ay doorashada madaxtooyada ku guulaystaan.
4. Xisbigii Udub Oo U Eekaadey Boqortooyo Burburaeysa.
Qodabadaa iyo qaar kale oo badani , waxay kaliftey in xisbiga UDUB tabihiisii siyaasadeed u badalo habar dhaliweydey aleelo ku waalatey.
• Kaadhadh la iibsado.
• Dacaayad raqiis ah.
• Beelo colaad lagu kala dhex abuuyro.
• Tvga qaranka oo laga mamnuuco xisbiyada mucaaradka.
• Hantida qaranka oo gaar loo adeegsado ( violation of code of conduct).Dardaaran: xisbiga kulmiyey waxan leeyahay weynuguulaysan inshaallaahu ee sodaha siigada ka qunyara.
QORE. Abdulkhaliq Mohamed Sheikh Osman NUR
← Shacbiweynaha Somaliland oo saaka u dareeray goobaha Codbixinta, safaf dhaadheerna u galay sidii ay u dooran lahaayeen hoggaamiyaha talada haynaya 5ta sanno ee soo socda
Xukuumadda Somaliland oo Xabsiga u Taxaabtay Tifatiraha Shabakada Wararka ee Baadiya.com →